मुसलमान महिलाद्वारा प्रधानमन्त्रीलाई ‘राखी’ उपहार ! – Everest Dainik – News from Nepal
मुसलमान महिलाद्वारा प्रधानमन्त्रीलाई ‘राखी’ उपहार !
२०७५, ९ भाद्र शनिबार
वाराणासी, भदौ ९ । मुसलमान महिला फाउण्डेसन (एमडब्लुएफ) का सदस्यहरूले आइतबार परेको रक्षा बन्धनका अवसरमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई ‘राखी’ उपहार पठाउने भएका छन् ।
मुसलमान महिला फाउण्डेसनकी सदस्य नाजिमा अन्सारीले भनिन्, “बनारसमा बसोबास गर्ने हाम्रो फाउण्डेसनमा आवद्ध मुसलमान महिलाहरूले पहिलोपटक सन् २०१३ मा प्रधानमन्त्री मोदीलाई राखी पठाएका थियौँ । त्यसपछि यसलाई निरन्तरता दिँदै आएका छौँ ।”
फाउण्डेसनमा आवद्ध महिलाहरूल भने, “उहाँ (प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीजी) लाई आफ्नो ठूलो दाजु तथा पिताजस्तै संरक्षकका रूपमा सम्मान गर्छौँ । हरेक बर्षजस्तै यसबर्ष पनि उहाँलाई राखी पठाइने छ । हामीलाई विश्वास छ उहाँले हामीलाई निरन्तर संरक्षकत्व दिइरहनुहुनेछ र आवश्यकता परेको समय सहयोग गर्नुहुनेछ ।”
अन्सारीको भनाइलाई पछ्याउँदै फाउण्डेसनकी अर्की सदस्य शबाना फतिमाले भनिन्, “हामीले हाम्रो घर र समाजमा भोग्नुपरेको अत्याचारविरुद्ध प्रधानमन्त्री मोदीको सहयोग खोजेका छौँ । हामी आशा गर्छौँ उहाँले हामीलाई त्रिपल तलाकजस्ता कुप्रथाबाट मुक्ति दिलाउनुहुनेछ ।”
ट्याग्स: Baranasi, Muslim Women, Pm Modi, Rakhi